Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku wajahan magaalada Jowhar iyo ammaanka halkaasi oo aad loo adkeeyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku wajahan magaalada Jowhar iyo ammaanka halkaasi oo aad loo adkeeyay
Waxaa maanta lagu wadaa in wafdi uu horkacaayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shekh Maxamuud ay gaaraan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, halkaas oo uu ka soconayo shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Ammaanka magaalada Jowhar ayaa ah mid aad loo adkeeyay, waxaana safarka madaxweyne Xasan Sheekh la sheegayaa inuu yahay mid uu ku doonayo inuu goob-joog ka ahaado soo bandhigida xildhibaanada cusub ee gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Waxaa dhawaan la qorsheynayaa in maamul loo sameeyo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, iyadoona sidoo kale lagu wado in bisha soo socota ee October la doorto madaxweynaha uu yeelan lahaa maamulka labadaasi gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Ilaa iyo haatan lama oga sida ay arrintaan ku suurto geli doonto, maadaama qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ay ka biyo-diideen inay ka qeyb-galaan shirka Jowhar ee maamulka loogu sameeynaayo labadaasi gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Sidoo kale, dhawaan ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) uu ku biiray waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda shirka Jowhar, isagoona shaaciyay in reer Hiiraan aysan marnaba aqbali doonin maamul ay gadaal ka riixeyso urur goboleedka IGAD.
Si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh ay gaaraan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, waxaana la ogaan doonaa wixii shirkaasi Jowhar ka socda kasoo baxo.